Xinhua Myanmar - တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိခြင်း မတိုင်မီ နိုင်ငံများစွာတွင် COVID-19 ရောဂါ ပြန့်နှံ့နေဖွယ်ရှိကြောင်း WHO အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ
တရုတ်နိုင်ငံ၌ တွေ့ရှိခြင်း မတိုင်မီ နိုင်ငံများစွာတွင် COVID-19 ရောဂါ ပြန့်နှံ့နေဖွယ်ရှိကြောင်း WHO အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြ
တရုတ် ရုရှား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ COVID-19
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့ရှိ ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် အကာအကွယ်ဝတ်စုံများ ဝတ်ဆင်ထားသော ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများအား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အောက်တိုဘာ ၁၉ ရက်က တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ) CHINA
ပေကျင်း ၊ ဧပြီ ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ COVID-19 ရောဂါ မူအရင်းအမြစ် ခြေရာခံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO)၏ ထုတ်ပြန်သော အစီရင်ခံစာတစ်စောင်တွင် နိုဗယ်လ်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံး လူနာ ဖော်ထုတ် တွေ့ရှိခြင်းမတိုင်မီကတည်းက နိုင်ငံများစွာတွင် ပြန့်နှံ့နေဖွယ်ရှိကြောင်း ဖော်ပြထားဟု မီဒီယာများ၏ သတင်းဖော်ပြမှုအရ သိရသည်။
WHO ပညာရှင်အဖွဲ့သည် SARS-CoV-2 ရောဂါ၏ အစောပိုင်း ပြန့်နှံ့မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မတူခြားနာသော နိုင်ငံများမှ လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို ရေးသားဖြန့်ဝေခဲ့သည့် အချက်အလက်များအား ပြန်လည်သုံးသပ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်ဟု Sputnik သတင်းအေဂျင်စီက ဆိုသည်။
“ SARS-CoV-2 ရောဂါ ပြန့်နှံ့မှုဟာ အစောပိုင်းရက်သတ္တပတ်တွေမှာတည်းက ကနဦးတွေ့ရှိထားတယ်လို့ ဆိုရမှာပေါ့ ၊ အချို့ သံသယရှိတဲ့ Positive နမူနာတွေဟာ ဝူဟန့်မြို့မှာ ပထမဆုံးလူနာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့အချိန်ထက်တောင် စောပြီး ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိထားတာပါ ၊ ရောဂါဟာ အခြားနိုင်ငံတွေမှာ တိမ်မြုပ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့နေဖွယ်ရှိတာပေါ့” ဟု WHO ၏ အစီရင်ခံစာကို ကိုးကား၍ Sputnik က ဖော်ပြခဲ့သည်။
လေ့လာစမ်းစစ်မှု လုပ်နိုင်သော စံနှုန်းသည် အကန့်အသတ်များရှိနေသည်ကို WHO က မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ သို့သော် ယင်း အစောပိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာများကို စုံစမ်းမှု ပြုလုပ်ရန် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း Sputnik သတင်းအရ သိရသည်။(Xinhua)
The WHO report pointed out that the quality of the studies is limited, but it is important to investigate these potential early events, according to Sputnik. Enditem
Medical staff wearing protective gears are seen ataclinic in Manila, the Philippines, Oct. 19, 2020.
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံ ယူနန်ပြည်နယ် ရွှေလီတွင် တစ်မြို့လုံးလွှမ်းခြုံ Nucleic acid ဆေးစစ်မှုများ ဆောင်ရွက်
Next Article တရုတ်နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း COVID-19 ကာကွယ်ဆေး သန်း ၁၀၀ ကျော် ထိုးနှံထားပြီဖြစ်